Toban ciidamo Turki ah oo lagu dilay labo weerar oo kala duwan oo ay geysteen PKK - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldToban ciidamo Turki ah oo lagu dilay labo weerar oo kala duwan oo ay geysteen PKK
September 27, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Askar Turki ah oo ilaalinaysa wado kutaala koonfurta-bari ee gobolka Sirnak.
Istanbul-(Puntland Mirror) Toban xubnood oo ciidamada amaanka Turkiga kamid ah ayaa lagu dilay labo weerar oo kala duwan oo ka dhacay koonfurta-bari ee dalka Turkiga, sida ay sheegeen warbaahinta maxaliga ah.
Lix kamid ah ciidamada Turkiga ayaa lagu dilay isku-dhac dhexmaray dagaalyahanada ururka laga mamnuucay Turkiga ee PKK oo ay leeyihiin Kurdiyiinta, weerarka ayaa ka dhacay magaalada Uludere ee gobolka Sirnak oo kuyaala meel u dhow xadka Ciraaq, sida ay sheegtay shalay oo Isniin ahayd wakaalada wararka dowlada Turkiga ee Anadolu.
Dhacdo kale oo lamid ah ayaa lagu dilay labo askari iyo labo waardiye tuulo lix kalena waa lagu dhaawacay weerar miinada dhulka lagu aaso ah oo ka dhacday gobolka Mardin, sida ay Isniintii shalay warisay Anadolu.
Waardiyeyaasha tuulada la dilay ayaa ahaa dad shacab ah kuwaasoo loo tababaray loona shaqaalaysiiyay in ay la dagaalamaan dagaalyahanada Kudiyiinta.
Turkiga iyo xulufadiisa Reer Galbeedka ayaa PKK ku daray liiska ururada argagixiso, PKK ayaa qaaday weeraro badan oo dhiig ku daatay oo ka dhan ah Turkiga tan iyo markii la asaasay sanadkii 1984-tii.
October 8, 2016 Tirada dhimashada oo sii kordhaysa kadib duufaanta Hurricane Matthew oo ku dhufatay dalka Haiti
July 8, 2016 Lix qof oo ku dhimatay weerar isbiimayn ah oo Booko Xaaraam ka geysatay masjid ku yaala Nigeria
September 9, 2016 Waqooyiga Kuuriya oo sheegay in ay tijaabiyeen gantaalkoodii shanaad oo nukleer ah oo lagu guulaystay
Madaxweynaha xilka ka tagaya ee Puntland iyo madaxweynaha cusub oo kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha xilka ka tagaya ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa madaxweynaha cusub Siciid Cabdullaahi Deni maanta oo Arbaco ah kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada. Kulanka oo imaanaya maalin kadib markii ay dhacday doorashada [...]
Puntland ministry of justice and religion affairs announces Monday 1 st day of Ramadan
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s Ministry of Justice and religion affairs has officially announced that tomorrow, Monday, June 6, is the first day of Ramadan, official said. Speaking with journalists in Garowe Puntland minister of Justice Salah [...]
Hargeysa-(Puntland Mirror) Maamulka Somaliland ayaa sheegay in ay dib u dhigeen wadahadaladii ay la geli lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya, sida uu sheegay masuul katirsan Somaliland. Sacad Cali Shire, oo ah Wasiirka Arrimaha Dibada maamulka Somaliland [...]